KENYA:Tirinta Codadka Iyo Rabshadaha Oo Is Bar-bar Socda!. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Nairobi(FMN)—Xilli ay Saraakiisha Guddiga Doorashooyinka ee Dalka Kenya Ku howlanyihiin Tirinta Codadkii doorashadii ku celiska ahayd ee ay shalay dadweynuhu udareereen;ayaa dhanka kale,waxaa hareer socda bannaan baxyo rabshadaha wata oo ay dhigayaan taageerayaasha Xisbiga Mucaaradka ah ee NASA oo dhawaan ku dhawaaqay inuu qaadacay ka qeyb galka doorashada madaxtinimo ee markii labaad dalkaasi ka dhacday maalinimaddii shalay ahayd.
Halkan ka akhriso Natiijada Cod-bixinta Ooo faah-faahsan
Doorashada shalay ayaa aad uga hooseeysay tii ka horeysay ee dhacday 8-dii August,marka la eego dhanka soo bixitaanka cod-bixiyayaasha,iyadoo goobo badan oo dalka kamid ah ay wax doorasho ah ka qabsoomin,islamarkaana guddigga madaxa bannaan ee Doorashooyinka dalka Kenya ay Sheegeen in 28ka Bishan October loo asteeyay in mar kale ay doorashadu ka dhacdo goobihii shalay lagu guul daraystay in lagu qabto.
Si kastaba ha ahaatee,doorashadan ayaa dalka kenya ugu kacday qiimo aad uweyn,iyadoo saameyn balaadhan ku yeelatay dhaqaalaha iyo xassilloonida guud ee dalka,waxaana laga cabsi qabaa in ay ka dhashaan rabshado ay dhiig badan ku daataan haddii siyaasiyiinta is haaya ayna la immaanin xal wara oo dalka lagu bad-baadiyo.
Previous Previous post: Ra’isul-wasaare;Kheyre oo Booqday Dhaawacyadii Turkiga lageeyay.
Next Next post: 8 Qof oo Ku dhimmatay Rabshado ka Dhacay Deegaanka Oromada.